2008 - Knowledge is Free
File (သို့မဟုတ်) Folder တစ်ခုခုကို မလိုအပ်လို့ ဖျက်လိုက်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ အထက်ပါပုံအတိုင်း Error Message ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ယင်းသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အဲဒီ File, Folder ကို Windows စနစ်(သို့မဟုတ်) အခြားသော program တစ်ခုခုက အသုံးပြုနေရင် ဖျက်ခွင့်မပေးပဲ error message ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသို့ ဖြစ်လာ ပါက restart ပြန်လုပ်ပြီးမှ ဖျက်ခြင်း၊ ဒါနဲ့မှ ဖျက်မရပြန်ရင် computer ကို safe mode မှာထားပြီး ဖျက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်မှသာ အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။
ပို၍လွယ်ကူသည်မှာ Unlocker Assistant ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။ မိမိဖျက်လိုသော File (သို့မဟုတ်) Folder ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်ပြီး ပေါ်လာ Menu ပေါ်တွင် Unlocker ကို ရွေးချယ် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုအခါ အသုံးပြုရန်အတွက် No Action, Delete, Rename, Move လုပ်ရန် ပေါ်လာပါမည်။ ဖျက်မည်ဆိုပါက Action တွင် Delete ကို ရွေးပြီး OK ကို Click နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် အလွယ်တကူ ဖျက်၍ရသွားပါ တယ်။
Click Here to Download : Unlocker 1.8.7 (238 KB)
Source of : http://ccollomb.free.fr/unlocker/
Posted by kmo at 8:50 PM No comments:
Windows XP Setup Simulator သည် Program တစ်ခုဖြစ်ပြီး Windows XP ကို ဘယ်လို Install လုပ်မလဲ ဆိုတာကို သင်ကြားပြသပေးပါတယ်။ Computer ရဲ့ Hardware နဲ့ Software အခက်အခဲများကိုလည်း စိုးရိမ် စရာမလိုပါဘူး။ အမှန်တကယ် Windows Install လုပ်နေသကဲ့သို့ ထင်ရပေသည်။ အဆင့်တိုင်းကို တိကျစွာနဲ့ Windows တင်စဉ်အတွင်းတွင် Restart မဖြစ်စေဘဲ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ၎င်း program ကို အသုံးပြု၍ Windows 2003 တွင်လည်း သင်ကြားရေးအတွက် လမ်းညွှန်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Package အတွင်းတွင် e-book များပါဝင်ပြီး အခြား Windows အခြေခံနှင့် Windows တင်နည်းအဆင့်ဆင့်တို့အား လွယ်ကူစွာ ရှင်း လင်း ပြထားပါတယ်။
download here: Windows XP Setup Simulator (1.23 MB)
More details: http://www.echoproject.net/
iRepair Man Program လေးဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သလောက် အခမဲ့ download အနေနှင့်ပါ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ကိုထိန်လင်းထူး က ရေးသားထားပြီး http://www.isoft.ygn.cc/ မှာ download ချယူနိုင် ပါတယ်။ iRepair Man ကို အသုံးပြုပြီးတော့ Folder Option, Registry Editor, Task Manager, Hidden Files နဲ့ File Extension များကို ပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
iRepairMan.exe (1,273 KB)
iRepairMan.zip (1,220 KB)
C++ Source.zip (497 KB)
Guide Par1 (952 KB)
Happy Birthday Virus Article.pdf (92 KB)
Posted by kmo at 11:39 PM No comments:
My Computer ရဲ့ Tool menu မှ Folder Option Command ပျောက်နေပြီး Show/Hidden folders and files စတဲ့ function များကို သုံး၍မရတော့ပါ။
Start menu ရှိ Run box ထဲတွင် regedit ရိုက်၍ Registry ကို ဖွင့်ရာတွင်လည်း အောက်ပါအတိုင်း Regisrty editing has been disabled by your administrator. ဆိုတဲ့ Registry Editor မှ Alert တစ်ခု တက်လာပြီး regedit ကို ဖွင့်မရပါ။
Ctrl+Alt+Del key များကို တွဲနှိပ်ပြီး Task Manager ကို ဖွင့်ရန်ကြိုးစားကြည့်သောအခါတွင်လည်း Task Manager has been disabled by your administrator. ဟူသော message box တစ်ခုတက်လာပြီး ဖွင့်မရပြန်ပါ။
Removing the Disable Registry Tools restriction:
Registry Editor ကို ပြန်လည်ဖွင့်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာ-
(1) Start ကို Click နှိပ်ပြီး Run တွင် အောက်ပါအတိုင်း command တစ်ကြောင်းကို ရိုက်ထည့်ပါ။
(1) Start ကို Click တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Run တွင် gpedit.msc ဟူ၍ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။
(2) User Configuration | Administrative Templates | Windows Components | Windows Explorer
ဟူ၍ အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ်ပြီး System ရဲ့ Setting အကွက်ထဲရှိ Prevent access to registry editing tools ကို double click နှိပ်ပြီး Not Configured ကို click နှိပ်ရွေးချယ်ပြီး Group Policy Editor မှ Exit လုပ်ပါ။
ဤနည်းလမ်းများဖြင့် Registry အား ပိတ်ထားခြင်းမှ ပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ပါမည်။
ထိုအခါ Registry ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သဖြင့် My Computer ရဲ့ Tools menu မှ Folder Options ပျောက်နေသည့်ပြဿနာကို ဖြေရှင်း၍ရနိုင်ပါပြီ။
(1) Start ကို Click နှိပ်ပြီး Run တွင် regedit ဟု ရိုက်ထည့်ပြီး OK ကို Click နှိပ်ပါ။
ထို့နောက် အောက်ပါအတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်း ဖွင့်သွားပါ။
ဆိုတဲ့ စာသားပေါ်ကို Double Click နှိပ်ပါ။ ထိုအခါ ညာဘက်ရှိ မြင်ကွင်းအတွင်း NoFolderOptions ဟူသော value ကိုတွေ့လျှင် delete လုပ်လိုက်ပါ။
(တစ်ခုသတိပြုရန်မှာ registry editor သို့ ၀င်၍ regisrty များကို ပြင်ခြင်းသည် အန္တရာယ်များသော မပြုပြင်မီ ကြိုတင်ပြီး backup လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။)
တွင်လည်း value များရှိပါက delete လုပ်ပစ်လိုက် နိုင်ပါတယ်။
ဟူ၍ အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်ပြီးနောက် Remove the Folder Options menu item from the Tools Menu ပေါ်တွင် double click နှိပ်ပြီး Not Configured ကို click နှိပ်ရွေးချယ်ပြီး Group Policy Editor မှ Exit လုပ်ပါ။
ဤနည်းလမ်းများဖြင့် My computer ရဲ့ Folder Option ပျောက်နေခြင်းမှ ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။
Removing the Disable Task Manager Tools restriction:
Ctrl+Alt+Del key များကိုနှိပ်ပြီး Task manager ရဲ့ ဖွင့်ရန်အတွက် ပထမဦးဆုံး Start > Run တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
ဟူ၍ အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ်သွားပြီး Remove Task Manager ပေါ်တွင် double click နှိပ်ပါ။
(2) ထို့နောက် Not Configured ပေါ်တွင် click နှိပ်ရွေးချယ်ပြီး Group Policy Editor မှ Exit လုပ်ပါ။
ထိုအခါတွင် Ctrl+Alt+Del key များလည်း သုံး၍ ရသွားပေလိမ့်မည်..။
Posted by kmo at 11:19 PM No comments:
Posted by kmo at 3:25 PM No comments:
Learn to use the core Office applications, Web integration, and Windows XP quickly, with ten manageable mini-books in one. Each of the ten parts isahands-on tutorial broken down into short and easy-to-understand lessons, getting the reader up to speed with Office essentials immediately. Ten books in one makes this an affordable and valuable means for learning Office 11 and more!
Posted by kmo at 4:21 PM 1 comment:
Posted by kmo at 1:08 PM No comments:
How to remove the Thumb.db File From your Hard Drive
ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ Thumb ဖိုင်များကို ဖယ်ထုတ်ခြင်း
Windows directory အတွင်းရှိ Thumb ဖိုင်များဟာ Thumbnail Pictures များကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ Thumbnail Picture တွေကတော့ ရုပ်ပုံတစ်ခု (သို့) document တစ်ခုကို အလျင်အမြန် ကြည့်ရှု၍ မရနိုင်အောင် သေးငယ်စွာ ပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Graphic (သို့) D.T.P ဖိုင်များကို မထုတ်မီ ပါဝင်သော အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးဖို့ လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဖိုင်များနဲ့ ပုံများကို Thumbnail View အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုပါက Thumb ဖိုင်များဟာ လွန်စွာအဆင်ပြေ လွယ်ကူစေပြီး ပိုပြီးလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Thumb ဖိုင်များဟာ File Size သေးငယ်ကာ နေရာယူမှု နည်းပါးသည်ဆိုပေမယ့်လည်း ကွန်ပျူတာကို ပုံမှန်ဆက်လက်အသုံးပြုသွားပါက သေးငယ်တဲ့ ပမာဏကနေ ကြီးမားတဲ့ ပမာဏအထိ နေရာယူလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Thumbs.db ဖိုင်များ သည်လည်း တကယ်တော့ မလိုအပ်ပါ။ ဖျက်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံတွေကို ကြည့်တိုင်း ပြန်တိုးလာမှာပါ။ ၎င်း ဖိုင် များ မပေါ်ချင်ရင်တော့...
(1) Desktop ပေါ်ရှိ My Computer ကို double click နှိပ်ပြီး Open လုပ်ပါ။
(2) Tools အောက်က Folder Option ကို Click နှိပ်ပါ။
(3) ထို့နောက် View Tab ကို Click နှိပ်ပါ။
(4) ပြီးနောက် Do not cache thumbnails ဘေးတွင်ရှိနေသော အမှန်ခြစ်ကို ရွေးချယ်ထားလိုက်ပါ။
(5) ထို့နောက် OK ကို ရွေးချယ်ပြီး My Computer မှ ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။
ထပ်မံပြီး Thumb ဖိုင်များကို ရှာဖွေပြီး ဖျက်ပစ်ရန်အတွက်..
(1) Start ကို Click နှိပ်ပြီး Search ပေါ်တွင် ထပ်မံပြီး Click တစ်ချက်ထပ်မံနှိပ်ပါ။
(2) File များကို ရှာဖွေရန်အတွက် All files and Folders ကို ရွေးချယ်ပါ။
(3) ရှာဖွေရန်အတွက် စာသားအကွက်ထဲတွင် thumbs.db လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
(4) ထို့အပြင် Start ကို Click နှိပ်ပြီး Run ကို ရွေးချယ်ကာ Text box ထဲတွင် %temp% ဟူ၍ ရိုက်ထည့်ပြီးလည်း ရှာဖွေကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပေါ်လာသော %temp% များအားလုံးကို ဖျက်ပစ်လိုက် နိုင်ပါပြီ။
Posted by kmo at 12:29 AM No comments: